နှာရည်တောက်တောက်ကျအောင်စားရမယ့် ရွှေဂုံတိုင်က အကင်အထောင်းရှယ်ကောင်းတဲ့ဆိုင်သစ်
9 Nov 2018 . 6:02 PM
ဆောင်းတွင်းဘက်ကူးလာတာ သတိထားမိကြလား? တိုက်ခတ်တဲ့လေလေးထဲမှာ အအေးဓါတ်တွေ တဖြည်းဖြည်းစိမ့်ပါလာပြီနော်။
ဒီလို အချိန်မျိုးလေးတွေကျ အီတာဆိမ့်တာတွေ က ထင်သလောက်စားမကောင်းတော့ဘဲ ပူပူစပ်စပ်၊ ရှုးရှဲရှဲအထောင်းတွေနဲ့ ခပ်မွှေးမွှေးကင်ထားတဲ့ အကင်ပူပူလေးတွေကို တ နေရပြီလေ။
ခပ်မွှေးမွှေးအကင်လေးတွေဆိုမှ အစားအစာဆိုင်ကောင်းကောင်းဆို တော်တော့တော်တော်ကို ရှားတဲ့ ရွှေဂုံတိုင်လို မြို့လယ်နေရာကြီးမှာ ထူးထူးခြားခြားသွားရေကျစရာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုလေ ရုံးသွားရင်း တွေ့နေရတာ စားမယ် စားမယ်နဲ့ ပိတ်ရက်မှပဲ တကူးတက အခရာက သွားစားဖြစ်တော့တယ်။
ဟဲ့ နင်က အကင်ကြိုက်တာမလား? ငါက အထောင်းတွေ၊အသုပ်တွေစားချင်တာ။ သူကကျ ထမင်းနဲ့ တခုခုစားမှဝမှာဆိုရင်တော့ ရွှေဂုံတိုင်လို သင်တန်းတွေ၊ ကျောင်းနဲ့ ရုံးတွေပေါတဲ့ နေရာကြီးမှာ ရုံးကနေ ထမင်းစားချိန်အမီ သွားစားဖို့ ရှယ်ကောင်းတဲ့ အကင်အထောင်းဆိုင်လေးနာမည်က “နေရာ ၂” တဲ့။
ဒီ အကင်နဲ့ အထောင်းဆိုင်လေးက ဒါ ဒုတိယမြောက်ဆိုင်ခွဲထင်ပါရဲ့။ ဒီနာမည်နဲ့ တခြားဆိုင် မြို့ထဲဘက်မှာကြားဖူးသေးတယ်။ ဒီဆိုင်ကတော့ ခုမှ ရွှေဂုံတိုင်မှာ လာထပ်ဖွင့်တာထင်တယ်။
ဘာတွေရလဲ ဘာစားကောင်းလဲဆို ဆိုင်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မုန့်တီထောင်းတို့၊ တခြား ဘာညာကွိကွ အထောင်းတော်တော်များများအစုံအစိရတယ်။ ဈေးလား တစ်ပွဲကို ၁၅၀၀ လောက်က စတယ်ဆိုတော့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် တန်တယ်လေ နော့။
နောက်ပြီး အကင်ဆိုမှ ရှယ်မွှေးတဲ့ ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့ ကျိုင်းတုံအကင်တဲ့။ ဘာယူယူ တစ်ချောင်း ၄၀၀ ပဲနော်။ ချေတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဟိုတချောင်း ဒီတစ်ချောင်းဆွဲထည့်တာပဲ။ အများကြီးတော့ မယူနဲ့နော်။ အထောင်းပါမှာရင် အစပ်သဘောနဲ့မို့ မကုန်မှာစိုးလို့ပါလို့။
ဒီရာသီက သင်္ဘောသီးထောင်းသာပေါတာ သရက်သီးထောင်းကရှားလို့ နေ့လည်နေ့ခင်း အိပ်ချင်ပြေ သရက်သီးထောင်းမှာကာမှ အိုးးးတကယ် သရက်သီးကိုမှ ယိုးဒယားသီးအချဉ်သီးကို ထန်းလျက်ရည်ပါးပါး၊ ငံပြာရည်၊ငရုတ်သီး၊သံပုရာရည်ခပ်ပါးပါးနဲ့ ချဉ်၊ငန်၊စပ်၊ ချိုလေး။ စားရတာ တစ်ဇွန်းနဲ့တင် ထိမိနေရော။ ချဉ်တာတော့ ဂိတ်ဆုံးပါပဲနော်။ အထောင်းတွေဆို ချိုစပ်စပ်ကြီးမကြိုက်တဲ့ အခရာကတော့ ဒီအထောင်းတွေကို ကြိုက်လှပါရဲ့။
အကင်တွေကတော့ အချဉ်စပ်ထားတာ ရှုးရှဲမှ တကယ့်ရှုးရှဲပဲ။ သိကြတဲ့အတိုင်း အကင်ရဲ့ အသက်က အချဉ်ပဲဆိုတော့ နေရာ (၂) ကတော့ အချဉ်နဲ့တင်ဆွဲဆောင်သွားပြီ။ အသားတွေက ပြောရရင် ဝက်အူချိုတွေက နံနေတယ်။
အသားတွေက သိပ်မလတ်သလိုပဲ။ ဘေကွန်အပ်မှိုလိပ်လေးကတော့ တအားစားကောင်းတာပဲ။ သူ့ချည်းအချဉ်နဲ့စားတာ ဆွေမျိုးမေ့အောင်ကို ကောင်းပါတယ်လို့။ ကျန်တာတော့ အသားတွေကို သိပ်မကြိုက်ပါ။
မုန့်တီထောင်းက ဂျင်းထင်တာ။ တစ်ပွဲကိုအများကြီးပဲ ပါတယ်။ ဈေးကလည်း ၁၅၀၀ ပဲ။ စားရတာတော့ ချဉ်စပ်စပ်လေး။ ၂ယောက်စားလို့ရပါတယ်။
ဆိုင်ကတော့ ၁၅ ခုံ လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ခပ်ရှင်းရှင်းပါပဲ။ မှာရတာ လူရှင်းတော့ မြန်တယ်။ ဝန်ထမ်းလေးတွေက မအူမလည်နဲ့ပေမယ့် သဘောကောင်းတယ်။ သန့်ရှင်းမှုကတော့ လိုပါသေးတယ်။ အားမရမိပါဘူး။ခြုံငုံပြောရရင် အကင်အသားလေးတွေလတ်ပြီး ဈေးပိုသက်သာရင်ပိုကောင်းမှာပဲလို့ အကြံပြုပါရစေ။
အချဉ်၊အစပ်ကိုမှ ဂိတ်ဆုံး နှာရည်ယိုရွှဲတပို့တွဲဖြစ်အောင်စားချင်ရင်တော့ ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်နားမရောက်ခင်၊ အမှတ် ၇၀ ၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ မနက် ၁၁ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်။ တခါတလေ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်တော့ နောက်ကျတာတွေ့တယ်။
စားမယ် ဆို ၁၂ နာရီဝန်းကျင်က ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်။ တော်ရုံ အထောင်းနဲ့အကင်ဆိုင်တွေက ရွှေဂုံတိုင်နားမှာ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှ နေရာ ၂ ဆိုင်လေးကတော့ လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေပေမယ့် ချဉ်၊ငန်၊စပ် နှာရည်ပါကျအောင် ဈေးတန်တန် စားရတာနဲ့တင် ခနခနရောက်ဖြစ်ဦးမယ့်ဆိုင်ပါလို့….
နှာရညျတောကျတောကျကအြောငျစားရမယျ့ ရှဂေုံတိုငျက အကငျအထောငျးရှယျကောငျးတဲ့ဆိုငျသဈ
ဆောငျးတှငျးဘကျကူးလာတာ သတိထားမိကွလား? တိုကျခတျတဲ့လလေေးထဲမှာ အအေးဓါတျတှေ တဖွညျးဖွညျးစိမျ့ပါလာပွီနျော။
ဒီလို အခြိနျမြိုးလေးတှကြေ အီတာဆိမျ့တာတှေ က ထငျသလောကျစားမကောငျးတော့ဘဲ ပူပူစပျစပျ၊ ရှုးရှဲရှဲအထောငျးတှနေဲ့ ခပျမှေးမှေးကငျထားတဲ့ အကငျပူပူလေးတှကေို တ နရေပွီလေ။
ခပျမှေးမှေးအကငျလေးတှဆေိုမှ အစားအစာဆိုငျကောငျးကောငျးဆို တျောတော့တျောတျောကို ရှားတဲ့ ရှဂေုံတိုငျလို မွို့လယျနရောကွီးမှာ ထူးထူးခွားခွားသှားရကေစြရာဆိုငျလေးတဈဆိုငျကိုလေ ရုံးသှားရငျး တှနေ့ရေတာ စားမယျ စားမယျနဲ့ ပိတျရကျမှပဲ တကူးတက အခရာက သှားစားဖွဈတော့တယျ။
ဟဲ့ နငျက အကငျကွိုကျတာမလား? ငါက အထောငျးတှေ၊အသုပျတှစေားခငျြတာ။ သူကကြ ထမငျးနဲ့ တခုခုစားမှဝမှာဆိုရငျတော့ ရှဂေုံတိုငျလို သငျတနျးတှေ၊ ကြောငျးနဲ့ ရုံးတှပေေါတဲ့ နရောကွီးမှာ ရုံးကနေ ထမငျးစားခြိနျအမီ သှားစားဖို့ ရှယျကောငျးတဲ့ အကငျအထောငျးဆိုငျလေးနာမညျက “နရော ၂” တဲ့။
ဒီ အကငျနဲ့ အထောငျးဆိုငျလေးက ဒါ ဒုတိယမွောကျဆိုငျခှဲထငျပါရဲ့။ ဒီနာမညျနဲ့ တခွားဆိုငျ မွို့ထဲဘကျမှာကွားဖူးသေးတယျ။ ဒီဆိုငျကတော့ ခုမှ ရှဂေုံတိုငျမှာ လာထပျဖှငျ့တာထငျတယျ။
ဘာတှရေလဲ ဘာစားကောငျးလဲဆို ဆိုငျရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး မုနျ့တီထောငျးတို့၊ တခွား ဘာညာကှိကှ အထောငျးတျောတျောမြားမြားအစုံအစိရတယျ။ ဈေးလား တဈပှဲကို ၁၅၀၀ လောကျက စတယျဆိုတော့ ဝနျထမျးတှအေတှကျ တနျတယျလေ နော့။
နောကျပွီး အကငျဆိုမှ ရှယျမှေးတဲ့ ငရုတျသီးစပျစပျနဲ့ ကြိုငျးတုံအကငျတဲ့။ ဘာယူယူ တဈခြောငျး ၄၀၀ ပဲနျော။ ခတြေယျ။ ကိုယျကတော့ ဟိုတခြောငျး ဒီတဈခြောငျးဆှဲထညျ့တာပဲ။ အမြားကွီးတော့ မယူနဲ့နျော။ အထောငျးပါမှာရငျ အစပျသဘောနဲ့မို့ မကုနျမှာစိုးလို့ပါလို့။
ဒီရာသီက သင်ျဘောသီးထောငျးသာပေါတာ သရကျသီးထောငျးကရှားလို့ နလေ့ညျနခေ့ငျး အိပျခငျြပွေ သရကျသီးထောငျးမှာကာမှ အိုးးးတကယျ သရကျသီးကိုမှ ယိုးဒယားသီးအခဉျြသီးကို ထနျးလကျြရညျပါးပါး၊ ငံပွာရညျ၊ငရုတျသီး၊သံပုရာရညျခပျပါးပါးနဲ့ ခဉျြ၊ငနျ၊စပျ၊ ခြိုလေး။ စားရတာ တဈဇှနျးနဲ့တငျ ထိမိနရေော။ ခဉျြတာတော့ ဂိတျဆုံးပါပဲနျော။ အထောငျးတှဆေို ခြိုစပျစပျကွီးမကွိုကျတဲ့ အခရာကတော့ ဒီအထောငျးတှကေို ကွိုကျလှပါရဲ့။
အကငျတှကေတော့ အခဉျြစပျထားတာ ရှုးရှဲမှ တကယျ့ရှုးရှဲပဲ။ သိကွတဲ့အတိုငျး အကငျရဲ့ အသကျက အခဉျြပဲဆိုတော့ နရော (၂) ကတော့ အခဉျြနဲ့တငျဆှဲဆောငျသှားပွီ။ အသားတှကေ ပွောရရငျ ဝကျအူခြိုတှကေ နံနတေယျ။
အသားတှကေ သိပျမလတျသလိုပဲ။ ဘကှေနျအပျမှိုလိပျလေးကတော့ တအားစားကောငျးတာပဲ။ သူ့ခညျြးအခဉျြနဲ့စားတာ ဆှမြေိုးမအေ့ောငျကို ကောငျးပါတယျလို့။ ကနျြတာတော့ အသားတှကေို သိပျမကွိုကျပါ။
မုနျ့တီထောငျးက ဂငျြးထငျတာ။ တဈပှဲကိုအမြားကွီးပဲ ပါတယျ။ ဈေးကလညျး ၁၅၀၀ ပဲ။ စားရတာတော့ ခဉျြစပျစပျလေး။ ၂ယောကျစားလို့ရပါတယျ။
ဆိုငျကတော့ ၁၅ ခုံ လောကျရှိမယျထငျပါတယျ။ ခပျရှငျးရှငျးပါပဲ။ မှာရတာ လူရှငျးတော့ မွနျတယျ။ ဝနျထမျးလေးတှကေ မအူမလညျနဲ့ပမေယျ့ သဘောကောငျးတယျ။ သနျ့ရှငျးမှုကတော့ လိုပါသေးတယျ။ အားမရမိပါဘူး။ခွုံငုံပွောရရငျ အကငျအသားလေးတှလေတျပွီး ဈေးပိုသကျသာရငျပိုကောငျးမှာပဲလို့ အကွံပွုပါရစေ။
အခဉျြ၊အစပျကိုမှ ဂိတျဆုံး နှာရညျယိုရှဲတပို့တှဲဖွဈအောငျစားခငျြရငျတော့ ရှဂေုံတိုငျမီးပှိုငျ့နားမရောကျခငျ၊ အမှတျ ၇၀ ၊ ရှဂေုံတိုငျလမျးမကွီးပျေါမှာ မနကျ ၁၁ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိ ဖှငျ့ပါတယျ။ တခါတလေ ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျတော့ နောကျကတြာတှတေ့ယျ။
စားမယျ ဆို ၁၂ နာရီဝနျးကငျြက ပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျနျော။ တျောရုံ အထောငျးနဲ့အကငျဆိုငျတှကေ ရှဂေုံတိုငျနားမှာ လကျခြိုးရလေို့ရပါတယျ။ အဲ့ထဲမှာမှ နရော ၂ ဆိုငျလေးကတော့ လိုအပျခကျြလေးတှရှေိနပေမေယျ့ ခဉျြ၊ငနျ၊စပျ နှာရညျပါကအြောငျ ဈေးတနျတနျ စားရတာနဲ့တငျ ခနခနရောကျဖွဈဦးမယျ့ဆိုငျပါလို့….